I-Karmacracy, enye yezona zixhobo zibalaseleyo zeebhlog kunye nenethiwekhi yoluntu-Geofumadas
Ngo-Okthobha, 2013 ezintsha, Internet kunye neBlogs
Abo banebhlog, iphepha le-Facebook okanye i-akhawunti ye-Twitter banokuthi bazibuze le mibuzo:
Bangaphi ukundwendwela abavela kwenye yeeTweets zam?
Zingaphi iindwendwe ezifike iyure yokuqala emva kokuba ndithumele ikhonkco kwiphepha lam le-Facebook?
Ungayicwangcisa njani i-titter namhlanje namhlanje kwi-10: 35 ekuseni?
Leliphi ilizwe endinazo iindwendwe ezivela xa ndihambisa ikhonkco le-Linkedin?
Ungasithumela njani isaziso sexesha elinye kwiiakhawunti ezininzi zeTweeter, Facebook ne-Linkedin ngexesha elinye?
Kule mibuzo kukho iKarmacracy, inyathelo labarhwebi baseSpanish abafuna ukuba singaneli nje ukwenza umsebenzi kwiintanethi zentlalo, kodwa kwaye sonwabe.
Ekuqaleni andifumananga ukuba ndinomdla kakhulu ukuba ndisebenza kuphela kwinto ecinezelekileyo ukugcina amandla asekwe kwikarma, kodwa kwimeko yam yadibana nolunye ulindelo lwam:
Iiyure zempembelelo enkulu
Ndidla ngokubhala amanqaku am kwi-11 ebusuku, ngelo xesha amandla am anemveliso ayasebenza ngakumbi ekuyileni ngaphandle kweziphazamiso kuneTV engasemva kunye nomculo weAndean othambileyo kwiselula. Kodwa ukuba ndiye ndaphawula ukuba inqaku lipapashiwe, impembelelo endiya kuba nayo iya kuba ncinci kuba abasebenzisi baseMelika balale kwaye bazosibona isilumkiso kusasa kunye nabanye abafike emva kwam. Ngelixa ndipapasha kwi-10 kusasa ngosuku olulandelayo; Ixesha apho abalandeli beli cala le puddle bekwiiofisi zabo benekofu kwaye abo baseSpain becinga ukuba ukwenza ubomi bonke obuqhubeka, baya kusibona isibhengezo kwangoko kwaye ukuba kufanelekile, baya kuya kwisiza.
Ke i-Karmacracy iyandivumela ukuba ndithumele isaziso ngeyure endizamile ngayo ndiya kuba notyelelo ngakumbi ngokukhawuleza.
Iiakhawunti ezininzi ngaxeshanye kunye namaxesha acwangcisiweyo
Ngamanye amaxesha ndifumana iindaba ezinomdla njengokwazisa ngazo kwi-Twitter, kodwa nakwi-akhawunti ye-Facebook kunye neakhawunti ye-Linkedin. Bacinga ukuba kufuneka bangene kwiakhawunti nganye ukuze bayithumele. Ke ndiyakwazi kwiselula ethathe isigqibo sokuyabelana kwangoko (okanye ekhutshiwe) kwiiakhawunti ezininzi ekukhetheni kwam, ngaxeshanye.
Ngoku, ukuba ndifumana iindaba ezininzi ezinomdla, ayibobulumko ukubazisa kunye okanye nexesha lokwahlula kakhulu. Kwimeko yam, xa iakhawunti indigcwalisela ngezithuba ze-5 kwisithuba esingaphantsi kweyure, ndiza kugqiba ukuyeka ukuyilandela, hayi kuba iyeka ukubangela umdla, kodwa ngenxa yokuba iyacaphukisa. Nge-Karmacracy ndingathatha isigqibo sokuba la manqaku mathathu ndiwafumeneyo azakuthunyelwa ngamaxesha awahlukeneyo, umzekelo, enye kwi-10 am, enye kwi-12: 07, elandelayo kwi-14: 35 ... kakuhle, ungacwangcisa inqaku Kwiinyanga ezimbini, njengombuliso weKrisimesi, okanye uSuku lwe-Fool luka-Epreli.
Ubuchwephesha bandivumele nokushiya iakhawunti yam nokuba iyasebenza nangona uhambo lwam olungena ngaphakathi lundishiya ngaphandle kwe-intanethi, kunye nokuphepha ukungena kwishedyuli yomsebenzi wam.
Ixesha elingaphezulu ...
Kukho izinto ezininzi ezizayo kamva, njengenkqubo yamabhaso (amantongomane) apho ikhula khona njengoko umsebenzi ugcinwa ngokwendalo. Ukusuka kwezona zinto zinomdla kuye kwezona zingenangqondo.
Unokwazi ukuba zingaphi iindwendwe esizithumele kwisizinda esithile kwaye abanye abasebenzisi bazenzile.
Amagama okubekwa, asekwe kwinto esiyithumela kakhulu. Kwimeko yam ndiwubeke phambili amagama aphezulu, i-gis, utm, i-geomatics, mundogeo kwimihla yokugqibela.
Umzekelo, jonga esi saziso endithumele ngaso malunga nenqaku le-GIS Lounge, xa iyonke i-79 ifumene ukucofa, nangona iphantse iyonke kwimizuzu yangoko. I-60% ivela kwi-Twitter, i-33% ivela kuFacebook, kwaye njengokuba ubona, umxholo kwiintanethi zenethiwekhi ufana neendaba kwiphephandaba elipapashiweyo ... banempembelelo kwangoko kodwa emva koko bawele enzonzobileni yento engeyiyo inoveli . Ungabona ukuba lelona nani likhulu lotyelelo luvela eSpain naseMelika, nangona yayithunyelwe kwi18: 42 Mexico time.
Iinkcukacha zinokubakho kwilizwe lonke ukuba wazi iimpembelelo zeakhawunti nganye esinayo kwaye okufanayo kuyaziwa kwiiakhawunti ezingaphandle ngokusekelwe koko bakuthumelayo.
I-Karmacracy ibonakala ngathi yenye yezona zinto zinomdla ezivela kwispanish esithetha iSpanish, ngaphaya kwesiqhagamshelo esilula esinqumlayo sokugcina iiakhawunti zemidiya yoluntu ziyasebenza. Ngenye imini ndibabuze ukuba iyintoni na imodeli yabo yeshishini, kuba into ebuhlungu kukuba ngenye imini iyekile ukubakhona kwaye amakhonkco amafutshane aphulwe, kwaye bandixelela kancinci malunga nombono wokukhuthaza amakhonkco axhaswayo ahamba njani. Ndiyibonile kukude, kodwa bathi bakusungula iiCD ndaziqinisekisa ukuba amakhwenkwe aneembono zabo zicacile. Ukunyaniseka, ixesha lindikhokele kwiikhonkco ezixhaswe ngemali, kodwa isikhombisi sayo sokucoca sinomdla kuba kuphela kukhetho oluzayo kwiiakhawunti ezinamagama athile abekwe endaweni ethile, ukuze lingashiyi mxholo.
Ngamafutshane, esinye sezona zixhobo zibalulekileyo kwabo banomsebenzi kwinethiwekhi yentlalo.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-900 ibhengeza iiprojekthi zokugqibela zeBean eziphefumlelweyo zeMbasa 2013
Post Next Inkululeko kunye nolawulo-phantse yonke into ekulungele iNkomfa ye-9 gvSIGOkulandelayo "